Hita amin'ny Cubot MAX3 misy fakantsary 48 MP ankehitriny $ 99 | Androidsis
Cubot dia manolo-tena hamokatra karazan-telefaona isan-karazany hanatrarana ireo filàna sy paosy isan-karazany an'ny mpampiasa rehetra. Manomboka anio, ilay vaovao vaovao Ny Cubot MAX3 miaraka amin'ny efijery efa ho 7 santimetatra sy ny Cubot KingKong 7, smartphone marani-tsaina ho an'ny mitaky fatratra, dia azo vidiana izao.
El KingKong 7 dia misy amin'ny $ 179,99 ary ny MAX3 dia misy $ 109,99 amin'ny AliExpress ankehitriny. Ireo mpampiasa liana amin'ny fividianana azy, dia afaka mitsidika ny pejy vokatra amin'ny AliExpress mba hahazoana ilay Coupon voafetra izay mampihena ny vidin'ny maody MAX3 ka hatramin'ny $ 99,99.
1 Cubot MAX3 Famaritana
2 Cubot KingKong 7 famaritana
3 Azo vidiana izao
Cubot MAX3 Famaritana
Ny Cubot MAX3 dia manana efijery HD 6,95-inch goavambe, miaraka amin'ny bezel tery izay mamela azy hanolotra taha 20.5: 9 izay manome antsika fomba fijery malalaka hankafizantsika ireo lalao na sarimihetsika ankafizinay.
Manana telo izy io Fakan-tsary aoriana 48MP miaraka amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy afaka mamantatra ny seho mandeha ho azy hanolotra kalitao avo indrindra, a Fakan-tsary eo aloha 16MP miaraka amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy izay mampihena ny tsy fahatantesan'ny hoditra ary koa ny filamatra ahafahantsika mamaha ny finday amin'ny tarehy.
Ny Cubot MAX3 dia mandeha amin'ny alàlan'ny processeur Octa-core misy 4GB RAM + 64GB fitehirizana anatiny, ny fitahirizana dia azo hitarina hatramin'ny 256GB amin'ny alàlan'ny karatra TF.
Ny processeur 8-core hitantsika ao anatin'ny Cubot MAX3 dia miaraka a Bateria 5.000 mAh, mihoatra ny ampy hahazoana ny tsara indrindra amin'ny finday avo lenta ary ho tonga amin'ny alina miaraka amin'ny bateria ampy.
Ny seta manontolo dia tantanan'i Android 11 Stock, tsy misy karazana sosona fanaingoana. Mampifangaro a NFC puce azontsika ampiasaina hividianana isan'andro amin'ny alàlan'ny Google Pay.
Cubot KingKong 7 famaritana
KingKong 7 dia manomboka amin'ny finday avo lenta finday avo lenta Fakan-tsary lehibe 64MP maha smartphone finday avo lenta an'i Cubot miaraka amina endrika kanto sy endri-javatra mahavariana.
Ny fisongadinan'ny Cubot KingKong 7 dia ny rafitra fakantsary faran'izay maranitra. Fitaovana a fakantsary aoriana telo izay misy a Masolavitra lehibe 64MP, solomaso ultra 16MP zoro malalaka miaraka amin'ny zoro 124 degre ny fomba fijery ary a 5M masolavitra makro.
La fakan-tsary eo aloha, manolotra antsika a Fanapahan-kevitra 32 MP ary mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy hanafoanana ny tsy fahalavorariana amin'ny hoditra kely ankoatry ny famelana antsika hanokatra ny fidirana amin'ny fitaovana mampiasa ny tarehy.
Ny Cubot KingKong 7 dia manana IP68 & IP69K voamarina amin'ny fanoherana ny rano, vovoka ary rano mitete. Izy io dia manana efijery 6,36-inch izay manana vahaolana amin'ny efijery FHD + (1080 * 2300） izay manome sary maranitra sy marevaka kokoa hahafahantsika mankafy ireo sary sy horonan-tsary raisinay miaraka amin'ny fantsona ho fanampin'ny karazana atiny multimedia.
Ao anatin'ilay fitaovana no ahitantsika ny processeur Helio P60 avy amin'i MediaTek, processeur 8-core izay miaraka aminy RAM 8 GB sy fitehirizana 128 GB. (toerana ahafahantsika manitatra hatramin'ny 256 GB amin'ny fampiasana karatra microSD).
Ny fahombiazan'ny processeur miaraka amin'ny RAM 8 GB dia ahafahantsika mihazakazaka fampiharana marobe miaraka mitazona ny fanjifana bateria.
Ny bateria natolotry ny KingKong 7 dia mahatratra 5.000 mAh, bateria mihoatra ny ampy hahazoana ny tsara indrindra amin'ny findainao mandritra ny andro nefa tsy misy fanafihana fitaintainanana raha sanatria lany bateria isika amin'ny fotoana mety indrindra.
Toy ny Cubot MAX3, ny KingKong dia tantanan'i Android 11 tsy misy sosona fanamboarana ary mampiditra a NFC puce, izay mamela antsika hampiasa Google Pay hividianana isan'andro.
Raha mitady smartphone miaraka amin'ny Android madio ianao, tsy misy sosona manokana, ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra anananao eny an-tsena dia hita ao amin'ity terminal ity. Amin'izao fotoana izao, tsy fantatsika raha hahazo ny fanavaozana Android manaraka izy, fa rehefa hitanay fa tena Google no miandraikitra ny fizotrany manontolo raha Android madio no resahina, dia tsy ho gaga izahay fa hanao izany ny Cubot MAX3 havaozina amin'ny Android 12 ary na dia ny Android 13 aza, fa ny fampahalalana amin'izao fotoana izao dia ny mpanamboatra ihany no mahalala.
Azo vidiana izao
Anisan'ny fanolorana voalohany azy premiere, Ny Cubot MAX3 Vidiny $ 109,99 izany. Na izany aza, manome antsika tapakila fihenam-bidy voafetra ny orinasa manomboka anio izay mamela antsika hahazo ny MAX3 amin'ny $ 99,99 ihany.
Raha liana amin'ny Cubot kingkong 7Azonao atao izany amin'ny vidiny ambany indrindra $ 179,99 ary amin'ny AliExpress manomboka anio.
Cubot dia manolotra modely finday 2 miaraka amin'ny vidiny sy ny fiasa samihafa mahafeno ny ankamaroan'ny filan'ny mpampiasa. Raha liana amin'ireto maodely ireto ianao dia maika fa mifidiana izay tianao indrindra, alohan'ny tapitra ny tolotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Azo alaina amin'ny Cubot MAX3 misy fakantsary 48 MP amin'ny $ 99 ankehitriny